ईन्जीनीएरीङ पढेकाले कस्तो काममा वैदेशिक रोजगारीमा जादा राम्रो होला ?
Fri, Aug 07, 2020 | 00:46:33 NST
प्रश्न : मैले डिप्लोमा इन ईलेक्टीकल ईन्जीनीएरीङ पढेको छु । म वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहान्छु । कस्तो काममा जादा राम्रो होला ?
उत्तर : राजेन्द्र भण्डारी, सचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - तपाईंले इन्जिनिएरिङ सम्बन्धि काममै जादा राम्रो हुन्छ । त्यसमा तपाईंको कामको अनुभव पनि भए झनै राम्रो हुन्छ, राम्रो तलब सुबिधा पाउनु हुनेछ । खाडी मुलुकबाट उच्च दक्ष कामदारको धेरै माग आइराको हुन्छ । तपाईंले आफू सुहाउदो पद हेरेर अप्लाइ गर्दा हुन्छ ।